Kwadoro Ekele Kwadoro Kwadoro - Atụmatụ Echiche Tattoos
Kwadoro Ekele Nkume Kwadoro
1. Omenala bilie tattoo ọkara sleeve echiche maka ụmụ agbọghọ
Na-eji egbugbere ọnụ na-egbuke egbuke nke a nwere ike ịmeghachi na mpaghara dị iche iche. Enwere ike ịhazi ya dị ka mkpụmkpụ osisi, ùkwù nke ọkpụkpụ, na égbè, na-enweghị égbè, dịka ụyọkọ, dị ka ibe na ọtụtụ akụkụ dịgasị iche iche nke ị ga-achọ ịmịpụta.
2. Ejiri aka nchikota ink nke umunwanyi
Ihe omimi bu na Chloris, chi nwanyi nke oji, bu onye mere onye mbu nke Gris na mgbe ahu, Aphrodite, chi nwanyi nke ima ndi ahu bu onye nwuru n'onwu mgbe Dionysus, onye nwe mmanya manyere ndi mara mma.
3. Ụdị igbu egbuke na-acha azụ dị iche iche na-eche echiche n'ubu maka ladies
Ugbu a, ị ghọtala ihe mere ndị inyom ji eji akara egbu egbu mee ihe dị iche iche n'ahụ ha.
4. Mma ima tattoo ọkara sleeve echiche ink maka ladies
Kedu ihe pụrụ ịma mma karịa ihe niile gbara gburu egbugbu na-adọrọ na ụkwụ ala? Nke a bụ otu n'ime ebe kachasị mma iji gosipụta egbugbere ọnụ rose gị na ahụ gị.
5. Uwe eji aka di iche iche wepuo onk egbu egbu maka umuaka
Nweta ihe omuma di iche na ihe omume na gi onwe gi bu onye ozo nke ihe ekere eke ma gbanwee anu anu gi n'ime egbu egbu. O doro anya na ị ga-ahụ ụzọ na ọ ga-ahụ akpụkpọ ahụ gị.
6. mgbehu edemede tattoo ink echiche maka ụmụ nwanyị
Ogbugbu ndi mmadu achapuchaala ka ndi isi na-egbu egbu. Ihe ndị e ji ahịhịa mee bụ ihe dị ebube, nke bụ ihe mere anyị ji ahụ ya mgbe niile.
7. Okirikiri egbuke egbuke egbuke onu na ubu maka umuaka
Ndị mmadụ na-eche echiche banyere okooko osisi na ama ama nke rose. Anyi nwere ihe ndi ozo nke choputara anyi otutu ihe. Maka enyi, anyị na-atụle edo edo edo; ezighị ezi bụ ọcha ma ọ bụ mgbu mgbe a na-egosipụta ịhụnanya site na acha uhie uhie.
8. Red bilie echiche igbu egbugbu maka nwa agbọghọ na ubu
Okpokoro ajuju ndi mmadu ejirila kpochapu n'ime ihe omumu nke ndi mmadu. Echeghị echiche na ndepụta ndị a na-egbu egbu aghọwo ihe a ma ama. Nke a apụtaghị na ndị ikom ahụ na-ahapụ naanị ha maka ịhụnanya maka rose.
9. Ọcha mara mma eji egbu egbu na ogwe aka
Debekwuo ya mgbe ị na-egbu egbu egbu egbu nke edere na akwara gị. Ozi bụ mgbe nile mgbe ọ bụla ị na-ewere gander na ya.
10. Ụdị ink na-egbuke egbuke na-egbuke egbuke mara mma maka ụmụ nwanyị na aka aka
Aka nwere ike iji aka na-egbuke egbuke nke nwere ike iji ihe dị iche iche mara gị.
11. Ekeepe akara akara uhie na-acha ọbara ọbara maka ụmụ nwanyị na azụ
Anyị na-ahụ ọtụtụ ụmụ nwanyị na-aghọta nkà. Ị hụla anya na ị ga - ebido? Ụdị dị ka nke a dị ịtụnanya
12. Ihe eji egbu egbu egbuke egbuke egbuke egbuke umu nwanyi na aka
ụkwụ akaegbu egbu diamondegbu egbu mmiriokpueze okpuezeNtuba ntugharimehndi imewearịlịka arịlịkaenyi kacha mma enyiakara ntụpọegbu egbu egbuna-adọ aka mmarip tattoosUche obiima ima mmaọdụm ọdụmaka akaakpị akpịndị na-egbuke egbuken'olu oluEgwu ugoegbu egbu ebighi ebiegbugbu maka ụmụ agbọghọnnụnụagbụrụ ebona-egbu egbuenyí egbu egbuegbu egbu osisi lotusụmụnne mgbuegwu egwuegbu egbu maka ụmụ nwokemma tattoosAnkle Tattoosegbu egbu okpuzodiac akara akaraudara okooko osisikoi ika tattoongwusi pusiegbugbu egbugbuegbu egbu hennaỤdị ekpomkpaaka akaazụ azụdi na nwunyeaka mma akaegbu egbuGeometric Tattoosechiche egbugbuakwara obindị mmụọ oziọnwa tattoos